Ranesa Firiana: “Depiote roa no hofidina amin’ny toerana be mponina” | NewsMada
Ranesa Firiana: “Depiote roa no hofidina amin’ny toerana be mponina”
Hanao ahoana ny fifidianana depiote amin’ity? Depiote roa no hofidina amin’ny toerana be mponina, fa tsy ny fari-pifidianana no ampitomboana. Fanazavan’ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana…
“Ny fanovana natao, ho an’ny fari-pifidianana be mponina: tokony ho roa ny solombavambahoaka hofidina. Amin’izay fotoana izay, lisitra kandidà no hofidina. Izay mahazo vato be indrindra no mahazo ny toeran’ny solombavambahoaka.”
Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, momba ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka amin’izao fotoana izao, izay vao avy nasian’ny Antenimiera roa tonta fanitsiana tamin’ny fivoriana tsy ara-potoana farany teo.
Mety ho lasa antoko roa samy hafa, ohatra, ny mahazo ny toerana roa amina fari-pifidianana iray izay be mponina. Toy ny tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, ny taona 2003, izany: saika ny Mapar sy ny Tim, ohatra, no mahazo ny toerana roa isaky ny boriborintany, raha jerena ny teto Antananarivo Renivohitra.
Averina amin’ny teo aloha ny fomba fifidianana
Raha ny lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka tsy mbola nasiam-panitsiana, tsy maintsy mamorona fari-pifidianana vaovao amin’ireo toerana be mponina. Mety hifangaro izany ka naverina amin’ny eo aloha ny fomba fifidianana solombavambahoaka. Hita fa tsaratsara kokoa izany: atao roa ny solombavambahoaka amin’ny toerana be mponina fa tsy mamorona fari-pifidianana vaovao.
Raha ny amin’izay lalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka teo aloha izay ihany, tokony ho solombavambahoaka iray ny hofidina isaky ny fari-pifidianana. Nefa ho maty antoka ireo toerana be mponina amin’izany. Izay no nanitsian’ny parlemanta ny lalàm-pifidianana hitovy tamin’ny fifidianana solombavambahoaka tamin’ny 2013 izay hatao amin’ny 27 mey ho avy izao.